A hapụrụ Debian na-enweghị onye nlekọta sistemụ n'ihi nghọtahie | Site na Linux
Michael Biebl, onye tinyeworo aka na mmepe Debian kemgbe 2004 na nke bu otu n'ime ndị isi nyere onyinye na nkesa nke na mpaghara njikwa mpaghara "systemd", hapụrụ ngwugwu na Debian.
Nke a bụ n'ihi na dị ka onye nlekọta site na sistemụ sistemụ, akọwawo ọnọdụ ahụ na mgbazi nke njehie sistemụ dịka "nzuzu na ara", ma na-ekwe nkwa iziga akụkọ ahụhụ na ndị mmepe sistemụ ọzọ.
1 Gịnị kpatara nke a?
1.1 Nsogbu ahụ nọ na-aka njọ
Gịnị kpatara nke a?
Ọgba aghara ahụ bilitere n'ihi ọdịdị nke mgbanwe mgbanwe na nsụgharị nke usoro 240, kedu mere omume mgbanwe mgbe nhazi ẹdude udev iwu na nsogbu maka ndị ọrụ Debian mgbe na-agbanwe renaming mgbagha nke netwọk interfaces.
N'agbanyeghị iji "AHA" nhọrọ kee agbụ aha interface na MAC adreesị mgbe ọ gbanwere n'ime udev site na systemd 240.
Ntanetị netwọk nke ndị na-ahụ maka Ethernet gbanwere aha ha site na ndozi ka ha mepụta na akpaghị aka (na mbụ a gbanwere nnọchi naanị otu ugboro, ebe ọ bụ na mbipute 240 enwere ike iji ya) Enwere ọtụtụ nnọchi).
Michael Bibl gwara ndị mmepe sistemụ ka ha laghachi omume gara aga mgbe aha aha ejiri aka akọwapụtara na nhazi bụ ihe kacha mkpa.
Nke ahụ bụ nlọghachi azụ ma e jiri ya tụnyere v239, m na-achọkwa ịgbakwunye ya na v241 milestone n'ihi na ọ nwere ike ịpụta ọnwụ nke ịnweta netwọk. Arụmụka Michael Bibl
Ma ndị mmepe ahụ eleghị mgbanwe mgbanwe a anya dị ka nsogbu dịka mgbanwe emere na sistemụ 240 anaghị emebi omume ederede, Ejiri atụmatụ udev na-enweghị akwụkwọ, arụmọrụ nke enweghị nkwa.
Agbanyeghị, achọpụtara ihe akaebe mechara na akọwapụtara omume dị n'elu na akwụkwọ ahụ.
Nke a bụ otú Yu Watanabe, zara, na-ekwu na ọ bụghị ihe metụtara:
Kedu ihe kpatara eji akpo lan0 mgbe akwọro onye ọkwọ ụgbọala Ee, nsonaazụ ikpeazụ ya bụ, ens3, mgbe ahụ ana m atụ anya na ọ bụ mgbe niile.
Kedu Michael Bible ọ zara:
A ga-akpọ ya lan0 mgbe niile n'ihi ọchịchị udev.
Nsogbu ahụ nọ na-aka njọ
Mgbe nke ahụ gasị, ndị mmepe sistemụ na-atụ aro ka akụrụngwa ọhụụ họrọ nhọrọ.
Ọ bụrụ na emepụtara iwu udev maka nsụgharị ochie nke sistemụ (ọ bụrụ na akọwapụtara atụmatụ aha maka nsụgharị na-erughị 240, setịpụ nhọrọ RenameOnce = ee na ndabara, ma ọ bụghị RenameOnce = no).
Na sistemụ mmepe ndị edeturu sistemụ, enwere mkparịta ụka gbasara atụmatụ ịwepụta, na-enweghị n'ihu ado, fixes nke systemd na fixes maka oké njọ chinchi pụtara na isi na nsụgharị.
Lennart Pottering jụrụ echiche ahụ, na-ekwu na enweghị ego. TDevelopersfọdụ ndị mmepe ahụ lere echiche ahụ anya dị ka nghọtahie dị mkpa, ebe ọ bụ na ihe kachasị mkpa maka ịmalite ọrụ iji mebie nkwụsi ike nwere mmetụta na-adịghị mma na ndị ọrụ.
Na nzaghachi, Lennart O kwuru n'eziokwu na ndị ọrụ njedebe anaghị eji nsụgharị ndị ọhụrụ nke sistemụ, mana jiri nchịkọta ejiri ntọala site na nkesaDịka ọmụmaatụ, a na-enyocha ha megide Fedora na ọrụ QA tupu ha etinye usoro ihe na RHEL.
Tupu nke a Michael Bible, arụmụka Ọ na-emetụta ndị ọrụ, n'ihi na nke a nwere ike ịmepụta esemokwu na nhazi nke onye ọrụ etinyegoro na usoro a:
Ọ dịghị mma maka ndị ọrụ ka ọ na-agbaji ntọala ndị ọrụ dị ugbu a. Kedu ihe ọ bụ ọjọọ
N'ihe banyere ịgbanwe ihe ndị ka mkpa na mmepe na ndozi ahụhụ na echiche Lennart, naanị ọgbọ nke njirisi dị iche iche ga-apụta, bụ nke a ga-eleghara chinchi ndị metụtara ụkpụrụ ụlọ mara mma anya, gburugburu eserese na-enweghị atụ, ọba akwụkwọ, na ndị ọkwọ ụgbọala. ma weghachite obodo.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere nsogbu ahụ, ịnwere ike ịgbasochi Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » A hapụrụ Debian na-enweghị onye nlekọta sistemụ n'ihi nghọtahie
Ọzọkwa m na-ekwu ya: systemd eme nzuzu !!
E wepụrụ Linux na nhọpụta Pwn2Own 2019 mana etinyere ya na Tesla